Jawaari oo ku dhawaaqay Guddiga Anshax doorashada Somalia
MUQDISHU, Somalia- Wareegto uu soo saaray Guddoomiyaha golaha wakiillada Somalia, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayuu uga hadlay arrimo ku aadan doorashada Somalia isagoo magacaabay guddi ka shaqayn doono anshaxa iyo dadajinta howlaha socda.
Qoraalka Jawaari ayaa lagusoo xulay 9 xubnood oo aan kamid ahayn golaha wakiillada Somalia, balse ay ka dhexmuuqatay haweenay isu taagtay Madaxweynaha dalka, balse aan ku jirin shakhsiyaadkii gudbistay araajidooda taasoo lagu magacaabo Faadumo Qaasim Dayib.
Guddigan, waxaa loo xilsaaray sidii ay ula socon lahaayeen dhammaan howlaha doorashada islamarkaana warbixin maalinle ah u siin lahaayeen guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha Somalia.
Magacaabistan ayaa timid xilli 9 maalin oo qura ay ka hartay waqtiga qabashada doorashada Madaxweynaha iyadoo sidoo kale mudane Jawaari magacaabay ruuxa u daadihinaya murashaxiinta dooda ay yeelan doonaan.
Jawaari oo baaq u diray Madaxda Xabsiga Dhexe ee Muqdishu
MUQDISHU, Somalia- Guddoomiyaha Barlamanka Federaalka Somalia, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa fariin u diray madaxda Xabsiga dhexe ee Muqdishu.
Xabsiga dhexe ayaa waxaa Ku xiran boqolaal dhalinyaro ah, kuwaas oo lagusoo qab qabtay howlgallo ciidamo ka sameeye ...
​Dooda murashaxiinta Madaxweynaha Somalia oo bur-burtay
Jawaari oo ku dhawaaqey musharaxnimada xilka gudoomiyaha Barlamanka Federaalka Somalia
​Diiwaangalinta Murashaxiinta oo lasoo gaba gabeeyay [Akhriso]